Duufaanta Irma ayaa bedeshay midabka jasiiradaha Virgin | Saadaasha Shabakadda
Duufaanta Irma ma ahan oo keliya inay sababtay waxyeello weyn oo maado ah waxayna dishay nolosha 58 qof, laakiin sidoo kale waxay si macno leh u baabi'isay jasiiradaha Virgin ilaa heer midabkii cagaarnaa ee qurxoonaa ee aan horay u arki jirnay, wuxuu u badalay bunni.
Midab bunni ah oo ina tusaya sida aadka u halista badan ee duufaantan u noqotay, taasoo ku saabsan in lagu daah furo qayb cusub oo ka mid ah cabirka Saffir-Simpson.
Dabeylaha ugu badan ee 295km / saacaddii iyo cadaadiska ugu yar ee 914 mbar, Duufaanta Irma waxay ka tagtay guryo aan tiro lahayn oo burburay, geedo aan tiro lahayn oo dhacay, iyo tiro aad u tiro badan oo dad ah oo wax walba lumiyay. Sida had iyo jeer jirta, waxaa jira kuwo waqti ka liita kuwa kale, ama waxay leeyihiin sababa la xiriira inay haystaan ​​ilaha dhaqaalaha oo aad u yar ama inay ku nool yihiin meeshii duufaan xoog badani dhaafto.
Khasaaraha ayaa la arki karay markii duufaantii ay ka tagtay aagga, iyadoo ku sii jeedda Mareykanka oo ay si tartiib tartiib ah u tabar darreysay, taasna waxaa caddeyn u ah tirada fiidiyowyada ee la soo geliyay YouTube iyo shabakadaha kale. Laakiin haddii taasi aysan ku filnayn, Hawlgalkii Dhulka ee Hawlaha (OLI) ee dayax gacmeedka NASA ee Landsat 8 ayaa qabtay sawir ka yaabin doona wax ka badan hal: gudaha, waxaad arkeysaa jasiirado Virgin brown ah, goorta ay cagaaran yihiin. Sababta Sababo badan baa jira.
Mid ka mid ah waa taas Dhirta ayaan si fudud u adkeysan karin dabeylaha xoogan ee dabeylaha waxayna ku dhamaatay in ay duufaanteeda lafteeda iska qaaddo, oo aan layaab lahayn. Dhirta kulaylaha, marka laga reebo in yar, ma laha xididdo xoog leh oo ku filan in ay si fiican ugu xirnaadaan dhulka, maadaama kolba duufaannada la samaynayo sannad kasta, ma haystaan ​​wakhti ay xidid ku yeeshaan sidoo kale, tusaale ahaan, geed geed (Gawaarida Quercus) ama geed. Dheeraad ah, cusbada bada ee xambaarsan duufaantu waxay gubaysaa caleemaha, taasoo keenta in dhirtu ay u dhammaato dhimasho.
Nasiib wanaagse, mar dambe ma dhaawici doonto. Maanta, waxaa hoos loogu dhigay duufaan kulul. Si kastaba ha noqotee, waxay qaadan doontaa toddobaadyo iyo xitaa sannado si dib loogu dhiso wax kasta oo burburay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaanta Irma waxay bedeshay midabka jasiiradaha Virgin
Isbedelka cimilada wuxuu dhalin doonaa 100 milyan oo dad ah oo sabool ah